ဘ၀နှင့်အချစ် Archives - POPPIN NEW
အလိမ့်အညာတွေ ပေါများနေတဲ့ အွန်လိုင်ခေတ်ကြီးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်က စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားတွေရှိနေသးတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနေပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်ကနေပဲ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေးဟာ ကံကြမ္မာဆိုးက ၀င်နှောက်ယှက်ခဲပမေဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နေတာကို ApannPyay ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်က အသက် (၃၁)နှစ်အရွယ် အမျိုးသား Narawut Phongyen ဆိုသူ နဲ့ အသက် …
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ ရှိတယ် … 💗
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ ရှိတယ် … 💗 ချစ်​သူ သက်​တမ်း ကြာလာတာနဲ့..မချစ်​​တော့ မှာ​ကြောက်​တဲ့ စိုးရိမ်​စိတ်​ မိန်း​ခေးတိုင်းမှာ ရှိတယ်​❤ ရန်​ဖြစ်​တိုင်း..ဖုန်းမဆက်​နဲ့ ​ပြော​ပေမယ့်​.ဖုန်းကို ​ရှေ့ချပီး ဖုန်းလာဖို့ ဆု​တောင်း​နေရတဲ့ အချိန်​မိန်း​ခေးတိုင်းမှာ ရှိတယ်​❤ ငါနဲ့ နင်​ ပြတ်​ပီလို့ စိတ်​ဆိုးပီး ​ပြော​ပေမယ့်​တကယ်​များ ပြတ်​သွားမလားဆိုတဲ့ ​ကြောက်​စိတ်​မိန်း​ခေးတိုင်းမှာ ခံစားဖူးတယ်​❤ သူနဲ့​တွေ့တိုင်း…သူလှတယ်​လို့ ​ပြောဖူးတဲ့ အကျီ …
Pop Pin New August 29, 2019
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ တကယ့်ကို ကြီးမြတ်သလို ခွန်အား သတ္တိတွေလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ဆိုလုပ်ဖြစ်ခြင်မှလုပ်ဖြစ်မဲ့ အရာတွေကအချစ်အတွက်ဆို တိုက်တွန်းစရာမလိုဘဲ သူ့အလိုလိုလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ အခုလည်းထိုင်းနိုင်ငံက Yom Homhuan လို့ လူသိများတဲ့ မျက်မမြင်အဖိုးတစ်ယောက်ဟာ ကောက်ညှင်းကျည်တောင့်လိုက်ရောင်းရင်း နေမကောင်းတဲ့ဇနီးသည်ကို ပြုစုနေရကြောင်း သိရပါတယ်။Matichon ရဲ့ အဆိုအရအသက် ၆၇နှစ်အရွယ်အဖိုးဟာ သူတို့ရွာကို သောကြာနေ့တိုင်း ကောက်ညှင်းကျည်တောင့် လာရောင်းလေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စက်ဘီးပေါ်မှာ …
ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းကလေးတွေကိုမှ ယောကျာ်းလေးတွေအသည်းစွဲအောင် ချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း (၄) ချက်
Pop Pin New August 28, 2019
ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းကလေးတွေကိုမှ ယောကျာ်းလေးတွေအသည်းစွဲအောင် ချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း (၄) ချက် … ခပ်ဆိုးဆိုးမိန်းကလေးတွေကိုမှ ယောကျာ်းလေးတွေ ချစ်မိနေရတဲ့အကြောင်းရင်း… ဖူးစာဆိုတာ တစ်ယောက်က အရပ်ရှည်သလို ၊ နောက်တစ်ယောက်က အရပ်ပုတာမျိုး ၊ တစ်ယောက်က ဆိုးရင် နောက်တစ်ယောက်က လိမ္မ်ာနေတာမျိုးပါ… ကိုယ့်နဲ့ဆန့်ကျင့်ဘက်အရာတွေနဲ့ တွေ့ရတတ်တာ သဘာဝပါ။ ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့အပေါ် ဆိုးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုဆို ဖျစ်ဖျစ်တုန်အောင်ကို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ …
“ကိုယ့်စိတ်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့စိတ်မညစ်ရအောင် ဒီစာလေးဖတ်ပါနော်…. ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နိုင်နေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ပူလောင်စေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်ကို မခေါ်ချင်တဲ့ သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်စေတနာကို နားမလည်သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာ မရှိတဲ့ သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့ …
ချစ်သူကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်မှာ မဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ …..
Pop Pin New August 24, 2019
ချစ်သူကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်မှာ မဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက္ခဏာများ ….. မိန်းကလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် သစ္စာဆိုတာ သင်မတောင်းလည်း သူ့ဖက်ကနေ ပေးပြီးသားပါ။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဟာ အခုဖော်ပြပေးတဲ့ အချက်တော်တေ်ာများများနဲ့ ကိုက်ညီနေရင်တော့ သင့်အပေါ် အရမ်းသစ္စာရှိပြီး ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်တဲ့ ချစ်သူကို သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် သင်အရမ်းကံကောင်းပါတယ်။ (၁) ရည်းစားရှိတာကို ယောက်ျားလေးတွေရှေ့မှာ …
Pop Pin New August 23, 2019
ထိုင်းနိုင်ငံက အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုံတွဲတစ်တွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၁၇)ရက်က မြစ်ထဲကို ခုန်ချ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သေကြောင်းကြံစည်ဖို့ လိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အချစ်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ မသေဘူးလို့ သက်သေပြဖို့ပါတဲ့။ ကလေးမလေးရဲ့ မအေဖြစ်သူက သူ့သမီးအကြောင်းကို အရင်သိခဲ့တာပါ။ ကနဦးတုန်းက သာမန်သာတားမြစ်ခဲ့ပေမယ့်၊ နောက်တော့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့အထိ ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကလေးမလေးကို အိမ်ထဲက …
“မင်းကို ချစ်တဲ့သူထက် မင်းအကြောင်း နားလည်ပေးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဖို့ တကယ် ခက်လွန်းတယ်”
Pop Pin New August 21, 2019
ချစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်သက်သက်ပဲ…မင်းကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ အချစ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့ ခံစားတတ်ရုံမရဘူးမင်းမျက်နှာ အရိပ်အကဲဖတ်တတ်ရမယ် မင်းအကျင့်တွေ လက်ခံပေးနိုင်ရမယ်…မင်းရဲ့စိတ်ကို လေ့လာတတ်ရမယ် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို မင်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလား….ဒါဆိုရင် သူကိုစိတ်ဒုက္ခထပ်မပေးပါနဲ့တော့…မင်းစိတ်ကို အမြဲတမ်းနားလည်ပေးတဲ့သူ ..မင်းနဲ့အတူ ဆိုးတူကောင်းဘက်အမြဲရှိနေပေးတဲ့သူ..ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲတွေ့တွေ့ မင်းဘေးမှာ…သစ္စာရှိရှိနဲ့ နေပေးခဲ့သူ အဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့်…စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့် မင်းဆီမှာ ဝန်းထုပ်ဝန်းပိုးများ ဖြစ်ခဲ့ရင်…စိတ်တွေပင်ပန်း မွန်းကျပ်ခဲ့ရင်..အချိန်ခဏလေးပေးပြီး ပြန်တွေးကြည့်ပါ …